Ciidamada Daraawiishta Puntland oo oggolaaday in la diiwaangeliyo - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada Daraawiishta Puntland oo oggolaaday in la diiwaangeliyo
Ciidamada Daraawiishta Puntland oo oggolaaday in la diiwaangeliyo
Kulamo loogaga hadlayay sidii loo xalin lahaa khilaaf ka jira diiwaangelinta ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka puntland ee gobolka Mudug.
Saraakiisha hoggaamineysa ciidamada ayaa diiday dalab uga yimid Guddiga Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu u xilsaaray diiwaangelinta iyo xareynta askarta badan ee ku sugan Gobolka Mudug qaybta Puntland maamusho.
Sababaha diiwaangelinta ayaa ah in la xaqiijiyo tirada askarta, goobaha ay ugu kala sugan yihiin iyo in qaarkood loo qaado deegaanno kale oo katirsan Dowlad Goboleedka Puntland sida ilo Xog ogaal ah ay u xaqiijiyeen Mustaqbal.
Guddiga Madaxweyne Deni uu u wakiishay fulinta diiwaangelinta ciidamada oo uu Guddoomiye u yahay Wasiirka Maaliyadda Puntland ayaa Odoyaasha dhaqanka ka dhaadhiciyay in saraakiisha ku qanciyaan fulinta qorshaha lagu xareynayo laguna tira-koobayo.
Saraakiisha Qaar ayaa shaki ka muujiyay diiwaangelinta oo qaarkood ayaa ku doodaya in laga ruqseynayo shaqada Ciidamada, halka kuwa kale lagu dhafayo ciidamo kale oo laga keenay deegaanno kale, iyagana la geynayo meelo ka baxsan Gobolka Mudug.